Kitra afrikanina : ny Township Rollers ny an’ny Cnaps ary ny Super Sport ny an’ny Elgeco | NewsMada
Kitra afrikanina : ny Township Rollers ny an’ny Cnaps ary ny Super Sport ny an’ny Elgeco
Efa nivoaka ary fantatra avokoa ny mpifanandrina amin’ireo solontena malagasy eo amin’ny fifaninanana afrikanina, taranja baolina kitra. Ekipa avy atsy Afrika Atsimo ny an’ny Elgeco Plus ary klioba avy ao Botsoanà ny an’ny Cnaps Sport.
Ny Township Rollers avy any Botsoanà no hifandona amin’ny Cnaps Sport eo amin’ny andiany faha-21 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny “Ligue des champions” ary ny Supersport avy atsy Afrika Atsimo kosa no hifandona amin’ny Elgeco Plus, eo amin’ny fiadiana ny amboara na ny “Coupe de la confederation”. Samy hiatrika ny lalao savaranonando avokoa ny solontena malagasy, amin’ity, ary eto Madagasikara avokoa ny hanaovana ny lalao mandroso ho an’ny roa tonta.
Misafidy amin’ireto daty ireto ny klioba hanatontosana izany : ny 10 na 11 na 12 febroary 2017. Herinandro aorian’io, izany hoe, ny 17 na 18 na 19 febroary ny fihaonana miverina. Raha tafavoaka amin’io lalao voalohany io ny Cnaps Sport, hiatrika ny lalao ampaha-16-n-dalana ka hifandona amin’izay mandresy eo amin’ny Atlabara avy any Soudan Atsimo sy ny Coton Sport avy any Kameronina.
Tsy miatrika ny lalao voalohany
Tsy miatrika ity lalao savaranonando ity ny USMA Alger, ny Ahly sy ny Zamalek Egypta, ny WAC avy any Maraoka, ny ESS sy ny EST Tonizianina, ny Sundowns Afrika Atsimo, ny Hilal avy any Soudan ary ny TP Mazembe-n’i Kongo.
Miandry ny Elgeco Plus eo amin’ny ampaha-16-n-dalana ny Ahly Shandy avy any Soudan raha afaka amin’io lalao savaranonando io izy ireo. Tsy mbola fantatra kosa aloha ny kianja hanatanterahana ny fihaonana na i Fianarantsoa na i Mahajanga satria mikatona i Mahamasina noho ny fanamboarana handraisana ny “Can U17”.
Marihina fa ekipa tsy mbola fantatra mihitsy ireo hihaona amin’ny solontena malagasy ireo.